I-Lake Cottage yesimanje, elungiswe Ngokugcwele! - I-Airbnb
I-Lake Cottage yesimanje, elungiswe Ngokugcwele!
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Barrett
U-Barrett Ungumbungazi ovelele
Woza ujabulele indlu yethu yechibi enokuthula, elungiswe ngokuphelele e-Wind Lake, e-WI. Gcwalisa ngazo zonke izinto ezibalulekile ezidingekayo ukuze usekele ukuhlehla kwakho okugcwele inkumbulo. Gcoba ngokubuka kwechibi ngenkathi uphuza ama-cocktail eduze nomlilo othokomele. Ezinyangeni zasebusika ujabulele ukudoba eqhweni, ukuhamba eqhweni nokunye. Ichibi elikhulu lokudoba eline-bass, i-pike, i-perch & walleye. Ezinyangeni ezifudumele, cwilisa injabulo echibini ngamanzi afika emadolweni kanye nesitezi esinesihlabathi sechibi. Suka kusiphithiphithi sempilo yansuku zonke, buyela emuva futhi unethezeke ngesitayela.
Ubusika obulungiswe ngokuphelele ngo-2020/2021 - bulungele ukuzijabulisa kwakho! I-Premium WIFI, ukubeka okuluhlaza, imicibisholo, izihlalo ezithokomele, i-TV enkulu nedeski elinokubukwa kwechibi (uma kwenzeka). Izindawo zokudlela zasendaweni namabha ekhoneni, ukuhamba ibanga elide.
Imizila ye-snowmobile iwuhambo lwemizuzu embalwa ukusuka endlini ukuya emzileni.
Izindawo zokudlela: I-Sportsman's kanye ne-Penny Bar zingamabha/ama-grill esiwathandayo amabili aseduze. I-Bass Bay Brewhouse imnandi uma ufuna ukudla okumnandi.
I-Pontoon kanye/noma i-Jet Ski iyatholakala ukuze iqashwe i-Spring-Fall ngenkokhelo eyengeziwe. I-Wind Lake inesihlabathi esihle lapho izikebhe zivame ukubuthana khona, kanye nendawo yokuphuzela utshwala/indawo yokudlela yokumisa idokodo kanye/noma uku-oda ukudla e-(Sportsman's). Izikebhe nezinsimbi zizobe zingekho emanzini ngomhlaka-1 Nov. kule sizini.
Amanothi omnikazi: Indawo entsha yangemuva iyeza maduze. Ingaphakathi, ngaphambili, nechibi yilapho ubumnandi bukhona! Njengoba iyichibi, ukhula lwasolwandle luyafika futhi luhambe amafidi okuqala angu-5-10 ogwini lolwandle. Nokho, ukusebenzisa iladi esikhumulweni semikhumbi emanzini afika emadolweni kunikeza indawo ecacile, enesihlabathi esiphansi futhi abathandi bechibi abaphumule njengathi bayakulangazelela! Amanzi afika emadolweni afinyelela ku-25-50' ukuphuma.
Ukufinyelela echibini kufaka phakathi indawo eyi-5' ebanzi efinyelela echibini enogwayi kanye nokufinyelela kwechibi ngendlela othanda ngayo. Ama-kayak angu-3, ukuntanta okuphefumulayo kanye nemidlalo yamanzi ejabulisayo efakiwe efana ne-Polish horseshoes / Beersbee.
Gcina indawo yakho yokubalekela namuhla, sibheke ngabomvu ukuba nawe!
Indawo encane ethokomele ezungeze i-Wind Lake, WI. I-pier yangasese kanye nokufinyelela kwechibi.
Ukufakwa kwekhiphedi yedijithali. Itholakalela izimo eziphuthumayo njengoba kudingeka!
UBarrett Ungumbungazi ovelele